JusTalk အခမဲ့ Video & Voice ကို APK ကို Android အတွက် Download လုပ်မခေါ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » JusTalk အခမဲ့ Video & Voice ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
JusTalk အခမဲ့ Video & Voice ကို APK ကိုပဌနာ
သငျသညျခဏလက်လွတ်ဘယ်တော့မှဒါ, ရိုးရှင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသော, လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပျော်စရာ - JusTalk ခေါ်ဆိုနှင့်အုပ်စုတစ်စုဗီဒီယိုတစ်ကားကိုလူတိုငျးအတှကျ app ကိုခေါ်ဆိုသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောစကားသံ & ဗီဒီယိုက
အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုမြန်ဆန်, ရှင်းလင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံသည် & ဗီဒီယိုအား * သင်သည် Wi-Fi သို့မဟုတ် On-The-သွားလာရင်း (2.5G / 3G / 4G) ပေါ်မှာဆိုရင်ရှိမရှိတောင်းဆိုထားသည်။
တစ်ဦးခေါ်ဆိုမှု app ကိုထက်ပိုမို။ Doodle, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုတက်အသက်ဝင်စေဖို့သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဂိမ်းများနှင့်ရှယ်ယာဓာတ်ပုံများ play, စတစ်ကာများပေးပို့ပါ။
သငျသညျဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်မည်မျှအသုံးပြုသူများကိုမကန့်သတ်နှင့်အတူ, သင့်ခေါ်ဆိုခစဉ်အတွင်းအုပ်စုတစုကို chat join ဖို့အခြားသူများကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ JusTalk မိတ်ဆွေများမှတဆင့်ရယူနိုင်ခြင်းပါပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့အချိန်မရွေးသူတို့ကိုရောက်ရှိဖို့ JusTalk ထဲကသုံးပြီး, အော့ဖ်လိုင်းနေချိန်တွင်ပင်လိုက်တဲ့အခါ!
အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်နှင့် "အမှတ်တရများ" ကိုသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သင်တစ်ဦးအဖိုးတန်အခိုက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ချစ်ရသူနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချိန်လေးဝေမျှဖို့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုစတင်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဘယ်အရာကိုမြင်, သင်ခံစားရသောအရာကိုခံစားကြရသည်။
ရိုးရှင်းသော interface ကို
အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်တဦးတည်းချစ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုနှင့်အတူအသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုရွေးချယ်ပါ။
ဗီဒီယိုကိုဖွင့်တဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့ app ကိုနှင့်အတူ Android နဲ့ Apple က iOS ကိုဖြတ်ပြီးသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပါ။
, themes များ Choose ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းဖန်တီး, သင်၏အတှေ့အကွုံ personalize မှစသည်တို့ကိုဖုန်းမြည်သံနဲ့အတူဂီတကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြ။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် screenshots နှင့်အတူယခုအချိန်တွင် Capture ။
အားလုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာ Call end-to-end encrypt လုပ်ထားကြသည်။ ကျနော်တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနားထောင်ရန်ဘယ်တော့မှနှင့်ဒေတာ save ဘယ်တော့မှ။ * ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခံစားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်, ရိုးရှင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အပြန်အလှန်ပျော်စရာအသံနှင့်ဗီဒီယိုကဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအချိန်ရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ မကြာမီလာမည်ထက်ပိုသော features တွေ, ဒါဖမ်းယူနားဆင်နေ။
* ဒေတာများကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတျအဘို့သင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာ:
အချိန်ကန့်သတ်, လုံးဝအခမဲ့ HD ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ချက်တင်ကဗီဒီယိုမပါဘဲသာလွန်ကြည်လင်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံနှင့်အရည်အသွေးမြင့်အင်တာနက်ခေါ်ဆိုမှု။
အလွယ်တကူသင့်လိပ်စာစာအုပ်နှင့် Facebook account ကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖိတ်ခေါ်နှင့် JusTalk ရန်သင့်မိတ်ဆွေများကိုထည့်ပါ။ သငျသညျစသညျကို SMS, Mail, လူမှုကွန်ယက်များ, အားဖြင့်သင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်
ခေါ်ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်? တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို အသုံးပြု. အပေါငျးတို့သအရေးကြီးသောအသေးစိတျနဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသားကိုပေးပို့ပါ။
အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူညီလာခံခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။ ဒါဟာအသင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အခမဲ့မိုဃ်းတိမ်ကိုအစည်းအဝေး app ကိုဖွင့်။
ထိပ်တန်း VoIP အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု apps များ, သငျသညျ, အပြန်အလှန်ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းဖန်တီးဓာတ်ပုံကိုဝေမျှ, တောင်းဆိုနေစဉ်အတွင်းအတူတကွဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ပုံပြင်ဓါတ်ပုံတွေကိုဝေမျှနေဖြင့်တဦးတည်းကိုခစျြမှတိုတောင်းသောပုံပြင်များကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
Android စမတ်ဖုန်း & Tablets, Apple က iOS ကိုပေါ်ရရှိနိုင်။ ဒါဟာမိုဘိုင်း Video chat ပြုလုပ်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံး Cross-platform မျက်နှာဆွေးနွေးချက် app ကိုဖွင့်။
40-90 720P HD ကိုအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူတောင်းဆိုလက်ရှိအချိန်သည်ဗီဒီယိုစဉ်အတွင်း VoIP သို့မဟုတ် vowifi ကွန်ယက်ကိုအသွားအလာ% သိမ်းဆည်းပါ။ ပျော်စရာကဗီဒီယို walkie Talkie အတိုင်းကဲ့သို့ပင်။
အသံခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှစ်ဦးစလုံးစာဝှက်ပေးတယ်။ block ရုံသင့်ရဲ့အမည်ပျက်စာရင်းပေးရန်မလိုချင်တဲ့နံပါတ်သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီ add အလွယ်တကူခေါ်ဆိုသည်။
ဘလူးတုသ်အော်တိုထောက်ခံချိတ်ဆက်ပါ။ အမျိုးမျိုးသောဖုန်းမြည်သံ & ရောင်စုံ themes များ။
- နယူး: အုပ်စုချတ်အတွက် join ဖို့လာကြ!
- နယူး: ခံစားကြည့်ပါ higher-အရည်အသွေးကိုဗီဒီယိုအားတစ်ဦးတည်းသာကလစ် (HD + အရိပ်အမြွက်) နဲ့ခေါ်ဆို!
- Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်အထွေထွေတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်မှု
- အချိန်မရွေးသူတို့အော့ဖ်လိုင်းနေလျှင်ပင်သင်၏အ JusTalk မိတ်ဆွေများမှတဆင့်ရဖို့ JusTalk ထဲကအသုံးပြုခြင်း
- ချတ်အတွက်ရရှိနိုင်ပို features တွေ: send and receive Picture & ရုပ်ပြောင်; ဓါတ်ပုံများသို့ရုပ်ပုံများကိုကယ်ဖို့စွမ်းရည် add နှင့်အခြားမိတ်ဆွေများမက်ဆေ့ခ်ျကိုသမိုင်း forward
JusTalk - အခမဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ပျော်စရာ video chat app ကို
28.25 ကို MB